Imithetho yokunakekelwa kwengqimba yomlomo yesifo sikashukela > Izinkinga zesifo sikashukela
Folk amakhambi ukunakekelwa ngomlomo sikashukela - the izinzuzo nezingozi
Ukuphulukiswa kwezicubu ezibi. Ngokuwohloka kwesifo sikashukela i-mellitus, noma yikuphi okuncane kakhulu, isilonda noma ukulimala kolwelwesi lwama-mucous, izinsini nolimi (ngokwesibonelo, ngokuluma ngengozi) kuphulukisa isikhathi eside futhi kudinga ukwelashwa ngokucophelela ukugwema izinkinga, ikakhulukazi ukutheleleka. Yini esingayisho ngokulimala okukhulu (ngokwesibonelo, ngemuva kokukhishwa kwamazinyo, ngesikhathi sokufakwa kokufakwa, ezinye izinqubo zamazinyo) nokulimala.
Hlikihla. Izifo ezithathelwanayo - isishayo sabashukela. Ngenxa yazo, zivame ukuphoqelelwa ukuthi zisebenzise imishanguzo yokulwa namagciwane ehlukahlukene. Ngokuphikisana nesizinda sokungasebenzi komzimba okwenziwe buthaka, lokhu kugcwele ukuthuthukiswa kwe-candidiasis yomgodi womlomo, inkambo leyo ihambisana nokuwohloka okukhulu kwempilo yempilo, futhi ukwelashwa kuthatha isikhathi esiningi. Futhi, i-trigger yokukhula kwe-thrush emlonyeni ivame ukuba izinga elikhuphukayo loshukela emathebeni.
Zonke lezi zinkinga zamazinyo ezingenhla zanda kaningi uma umuntu onesifo sikashukela ebhema. Ngemuva kwakho konke, ukubhema kubhebhethekisa ukunikezwa kwegazi ezicutshini zomgogodla womlomo, okubenza babe sengozini enkulu yokutheleleka futhi kunomthelela omubi kakhulu ekuphulukisweni kwabo.
Ukuhlanzeka kwesifo sikashukela: Imithetho yokunakekelwa kwesikhumba kwabanesifo sikashukela
Imvamisa, isifo sikashukela, ikakhulukazi esezingeni eliphezulu, sihambisana nokulunywa kwesikhumba. Isibonakaliso esinjalo siphoqa umuntu ukuthi abone udokotela, kwesinye isikhathi okokuqala. Ukuhlanzeka kushukela sikashukela kubalulekile kunoma yisiphi isigaba se-pathology.
Esikhathini sikashukela, imithambo yegazi emincane nemithambo engaphakathi kutholakala, okuholela ekwandeni kokuzwela kwesikhumba.
Ngalesi sifo, ngenxa yokuphazamiseka kwe-metabolic, ukungasebenzi komzimba kuyancipha. Abantu abanesifo sikashukela kufanele babambelele emithethweni yokuhlanzeka: qaphela inhlanzeko yomzimba, izingubo kanye nekhaya lakho.
Ukuzilolonga kanye nokwenza izinto ngokomzimba okungenzeka kwenza ukwandisa ukukhuthazela komzimba kwesifo sikashukela. Futhi, ukunakwa kufanele kukhokhwe ku-cavity yomlomo nokunakekelwa kwamazinyo.
Isifo sikashukela, ubungozi be-caries nesifo sezinsini kukhuphuka kaningana. Udokotela wamazinyo uvakashelwa kanye ezinyangeni eziyisithupha.
Ukuhlanzeka kwesifo sikashukela kufaka ukunakekelwa okunyaweni okuphoqelekile, ngoba:
isikhumba somile futhi sivele sishwabane
izilonda kanye nemifantu kuvela ezinyaweni.
Ukuvimbela izinkinga kwisifo sikashukela, odokotela balulekisisa ukunakwa okukhethekile kwizimpawu ezenzeka phakathi kwalesi sifo.
Isifo sikashukela i-mellitus singaba yisisusa sokuzwela okuphansi kwemikhawulo engezansi. Kuyadingeka ukuvikela imilenze kusetshenziswa kuphela izicathulo ezintofontofo nokugwema ukuxubuka nokulimala. Imilenze ephilile iyingxenye edingekayo yokwelashwa kwesifo sikashukela, futhi udokotela wakho uzobahlola lapho bebonisana.
Enye yezinkinga ezivame kakhulu ngalesi sifo unyawo lwesifo sikashukela. Njengoba ukuzwela kukhubazekile, umuntu akazizwa isikhathi eside ukuthi anganyakazisa izicathulo, kuvela ama-callus nezinyawo ezilimele. Amanxeba okuphulukisa kabi angabonakala ngisho nasisikelweni esincane kakhulu.
Ukuvimbela unyawo lwesifo sikashukela, udinga:
Hlola izinyawo nsuku zonke,
ukucubungula izindawo ezilimele.
Ukunakekelwa kwezinyawo kwansuku zonke kufaka phakathi:
ukugeza izinyawo zakho ngamanzi afudumele nensipho esezingeni,
esula isikhumba ngethawula lokugeza,
ukuthambisa konyawo ngokuthambisa okhilimu,
phatha izikhala ezihlukanisanayo ngotshwala,
Sebenzisa amasokisi woboya agqoke ukotini.
Odokotela banikeza izincomo ngesimo se-toenails. Ngakho-ke, azikwazi ukusikwa ngesikhafu, futhi udinga ukuzifaka njalo. Umphetho wesipikili kufanele uhlale uqondile, kepha hhayi mfushane kakhulu.
Gqoka izicathulo ezintofontofo ezinenzwane ebanzi nesithende esincane. Kufanele kube ngesikhumba nokuqina. Lo mthetho usebenza kwabesifazane nabesilisa abanesifo sikashukela. Awukwazi ukuphatha izinyawo zakho wedwa, futhi ngaphezu kwalokho faka i-pedicure yabanesifo sikashukela uma izinga lokubona alanele.
Kuyingozi ukuzindla, kuyenqatshelwa ukukhipha okusanhlamvu nokusebenzisa imikhiqizo equkethe acid.
Kungcono ukungakhiphi amabele ngokwawo, ukuze kungalimazi isikhumba bese kubangele ukutheleleka. Imilenze ayiphathwa ngamanzi ashisayo ngokweqile.
Isigaba sezinqubo zokuhlanzeka sihlanganisa nokwenza lukhuni, esandisa umphumela saso wokuvimbela nokuphulukisa, uma sihlanganiswa nokuzivocavoca ngokomzimba ku-mellitus yesifo sikashukela.
Imithetho yokuphatha kumele ibhekwe:
kancane kancane: noma yisiphi isenzo sokuqina kufanele sikhule kancane,
ukusebenza njalo nokuhleleka: izinqubo zenziwa njalo, kwesinye isikhathi ezifundweni ezihlukile, kepha okungenani inyanga nesigamu nsuku zonke ngaphandle kwekhefu elide,
indlela ebanzi: sebenzisa hhayi eyodwa, kepha izinhlobo ezimbalwa zokuqina,
ubuntu: ubude nobukhulu, kanye nohlelo lokuqinisa izinqubo, kunqunywa ngeminyaka, isimo sempilo, ukukhula komzimba kanye nezimpawu zomuntu ngamunye.
Ukuqothula umoya womuntu onesifo sikashukela inqubo ebaluleke kakhulu. Ukuhamba emazingeni okushisa ahlukahlukene sekuvele kuyindlela yokucima umoya. Izenzo ezinjalo zingaqalwa emakamelweni okushisa kwegumbi - degrees 18-22.
Uma izinga lokushisa lomoya lingaphansi kwama-degree ayi-16, khona-ke ngemuva kwamaviki ama-2-3 ungaqala ukuthatha amabhati emoyeni ovulekile. Uma izinga lokushisa lingaphezulu kwama-25 degrees, khona-ke kungcono ukuthi abanesifo sikashukela banciphise izinqubo ezinjalo.
Amabhati omoya enziwa kangcono endaweni ehlathini noma engadini, eduze nedamu. Uma kungekho ithuba elinjalo, imisebe yelanga ithathwa kuvulandi, ilele embhedeni noma ocansini. Kubalulekile ukuhlanganisa ukugeza komoya nokuzivocavoca umzimba njalo kushukela.
Ngezinga elanele lokuqina futhi ukungabikho kwe-contraindication ebalulekile, ukugeza komoya kungasetshenziswa ngesimo sokulala ebusuku emoyeni. Izinqubo ezinjalo kufanele zenziwe kuphela ngemuva kokubonana nodokotela.
Yimaphi amathuluzi azosiza ekunakekelweni kwesifo sikashukela azotshela ividiyo ekulesi sihloko.
Isifo sikashukela sandisa ingozi yezinkinga zesikhumba nezomlomo. Ukuphazamiseka kwemetabolic kuvusa ukwehla kokungazinzi komzimba. Iziguli zivame ukuba nezifo ezingamahlalakhona (i-bacterial, fungal) isikhumba, i-stomatitis, i-periodontitis, i-caries. Isikhumba esifanele nokunakekelwa komlomo kunganciphisa amathuba alezi zinkinga.
Ukuhlanzwa njalo, ukufudumeza, ukondla isikhumba kunikeza izimo ezijwayelekile ekusebenzeni kwe-epidermis kanye ne-dermis.
Ukunakekelwa kwansuku zonke, sebenzisa insipho engathathi hlangothi nejeli lokugeza. Ama-ejenti anjalo anenkomba ye-acid-base (ph) esondele ku-5.5. Azephuli ungqimba lwesikhumba-oluvikelayo lwamanzi.
Ngemuva kokugeza nokugeza, udinga ukusula wonke umzimba ngethawula. Naka izikhala ezihlukanisayo ezingalweni nasemilenzeni, emphethweni wesikhumba, ezinqeni, njll. Umswakama owedlulele uholela ekuqothulweni. I-epidermis eboshelwe ngamanzi ilahlekelwa yizinto zayo zokuvikela ngokumelana nama-microorganisms.
Ukuze ulondoloze ubumbeke bemvelo kwesikhumba, kufakwa amanzi oswakama nokudla okunempilo. Ibhalansi yabo ye-acid-base kufanele ibe ngaphansi ngokwanele. Izindlela ezifanele nge-ph 3-4 zifanelekile. Ama-lotions anjalo ngokuvamile aqukethe ama-acid acid. Bavuselela isikhumba futhi bandise ukuqina kwawo. Ngaphezu kwalokho, zivimbela ukweqisa nokuqhekeka kwe-epidermis.
I-lotion kufanele ifakwe esikhunjeni esihlanzekile somzimba kabili ngosuku. Ukhilimu awudingeki kuphela ezindaweni ezisezindaweni zemihlambi yemvelo (ama-armpits, izikhala ezihlukanisanayo, isikhumba ngaphansi kwezinduna ze-mammary, njll.)
Okubaluleke kakhulu empilweni yezikhumba yizingubo kanye nezingubo zokulala. Zama ukusebenzisa izindwangu zemvelo ikakhulukazi ngalezi zinhloso.
Izingubo zangaphansi zikotini zithuthukisa umoya omncane. Kufanelekile ukugqoka ehlobo nasebusika. Kwingubo enjalo yangaphansi, isikhumba "siyaphefumula". Umuntu ujuluka kancane, mancane amathuba okuba ahlangane nezinqubo ezithathelwanayo ebusweni bomzimba.
Uma isikhumba sakho sizwela kakhulu, funa izingubo zangaphansi zamathambo ezithengiswayo. Izingubo ezinjalo azinamthungo. Akucindezeli izicubu ezithambile ezingekho emthethweni.
Kungcono ukukhetha ilineni lombhede kusuka kwelineni noma kukotini. Shintsha ikhithi okungenani kanye ngesonto. Izingubo zokulala kufanele zibe ntofontofo futhi zibanzi. Uma ulele kumasokisi, khona-ke khetha amamodeli ngaphandle kweqembu eliminyene le-elastic.
Ingozi yesifo sikashukela yinoma yimuphi umonakalo esikhunjeni. Ngisho nokuklanywa okuncane nokulimala kudinga ukwelashwa nge-antiseptic. Uma ufuna ukubulala amagciwane, sebenzisa izixazululo ezingenawo utshwala (i-chlorhexidine, i-hydrogen peroxide, njll.). U-Ethanol womisa ingaphezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, utshwala bungabhubhisa amaseli esikhumba futhi banciphise ukuvuselelwa kabusha.
Uma ulimele kabi ngokwanele, khona manjalo thintana nodokotela ohlinzayo ukuze uthole usizo lodokotela. Ukwelashwa ngudokotela kuvame ukubandakanya ukwelashwa, ukugqoka, imithi elwa namagciwane. Uma isilonda sincane kepha singapholi isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezintathu, thintana nodokotela ohlinzayo wendawo noma isikhungo sikashukela.
Izimpawu zokutheleleka ngefungus zingavela esikhunjeni namazipho onesifo sikashukela. Ucwaningo olukhethekile lwembula le nkinga cishe kuzo zonke iziguli ezinesifo sohlobo 2. Ngohlobo 1 sikashukela, izilonda zesikhumba zokukhunta nazo zivame kakhulu.
Ukubhekana nale nkinga, udinga usizo lodokotela bamazinyo kanye ne-arriers yonke yemithi. Udokotela wakho angakunikeza amakhambi endawo namaphilisi endawo. Ukululama okugcwele, izinyanga ezimbalwa zokwelashwa okujwayelekile kuyadingeka.
Esikhathini sikashukela, ukuqapha okungajwayelekile kwezokwelapha kwesimo somlomo kuyadingeka. Vakashela udokotela wamazinyo wakho njalo ezinyangeni eziyisithupha ngenhloso yokuthibela.
Ukuxubha nsuku zonke amazinyo akho, ulimi, izinsini ekhaya. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa izinyo (nge-fluoride), hlamba, i-floss (i-floss).
Udokotela wamazinyo uzokusiza ukuthi ukhethe izinyo. Imvamisa, ezigulini ezinesifo sikashukela, ama-ejenti anezithako zemvelo zamakhambi afanelekile. Amakhambi akhishwa yisifo sezinsini futhi anciphise nengozi ye-periodontitis.
Ungasebenzisa itshungamu engashukela ushukela usuku lonke. Inomphumela owengeziwe wokuhlanzwa. Ngaphezu kwalokho, itshungama inyusa ukukhiqizwa kwamathe futhi yenza ibhalansi ye-acid-base ibhalwe ngokomzimba. Udinga ukukuhlafuna ngemuva kokudla ngakunye imizuzu engu-10-15.
Unganciphisa ubungozi be-caries ngosizo lwezindlela ezikhethekile zokuqinisa koqweqwe lwawo. Ama-gel akhumbuza okunjalo andisa usizi lwezicubu ezinzima. Ukwakheka kwemali - ukugcwala okukhulu kosawoti we-calcium. Ukusetshenziswa njalo kwejeli kunciphisa ingozi yokubhujiswa koqweqwe lwawo futhi kwenza ingaphezulu lezinyo libe mhlophe.
Ukugcina amazinyo, izinsini, nesikhumba kuphilile, ukunakekelwa okujwayelekile kukodwa akwanele. Kuyadingeka ukulondolozela i-glucose ejwayelekile. Ukwelashwa kwesifo esingaphansi kwehlisa ingozi yazo zonke izinkinga.
Ukulawulwa Kwesifo Sikashukela:
kunciphisa ingozi yokutheleleka,
kuthuthukisa amandla okuvuselela,
kuphazamisa ukuphuma komzimba kwezicubu.
Ngaphezu kwalokho, into ebalulekile yomlomo wesibeletho nesikhumba isimo sengqondo sesiguli ukubhema. INicotine ifaka ukuhamba kwegazi emithanjeni emincane, iphazamisa ukondleka kwezicubu. Misa ukubhema ngokuphelele ukuze unciphise ubungozi bezinkinga.
Elinye iphuzu elibalulekile ukudakwa okwanele kwamaminerali namavithamini emzimbeni. Zama ukudla ngokugcwele futhi okuhlukahlukene. Ungayeki inyama, inhlanzi, izinkukhu, imikhiqizo yobisi. Ngaphezu kwalokho, yidla imifino noma okusanhlamvu ngaso sonke isidlo.
Ukudla sikashukela akuyona into eqine kakhulu. Kepha noma kunjalo, ngokuqhubeka kwesikhathi, iziguli zakha ukuntuleka kwamavithamini namaminerali. Isidingo esikhulu samavithamini B, ama-antioxidants kanye namaminerali.
Ukukhokhela lokhu kushoda, ungathatha ama-multivitamini. I-Hypovitaminosis prophylaxis ivame ukunconywa izinyanga ezine ngonyaka. Qala ukuthatha amalungiselelo ayinkimbinkimbi ngemuva kokubonisana nodokotela wakho.
Ukuthola izinqumo ezifanele zokuxubha amazinyo nosizo lokuhlanza kusiza ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yesifo sikashukela.
Kubantu abanesifo sikashukela, ulwazi lwemithetho yokuhlanzeka ngomlomo lubaluleke kakhulu: eminyakeni embalwa ngemuva kokuqala kwesifo, bangase bakhiqize ama-caries, ukuvuvukala kwezinsini kungaqala, ngenxa yalokho ngisho namazinyo aphilile angagcinwa emgodini. Kepha kunobudlelwano obuhlukile: kaningi akunakwenzeka ukufeza i-standardoglycemia lapho kukhona ukuvuvukala emgodini womlomo 1. Ngakho-ke, ukukhetha imikhiqizo yokunakekela kuwumsebenzi obalulekile futhi obalulekile kumuntu onesifo sikashukela.
Ngokuya kwe-World Federation 2, ama-92.6% abantu abanesifo sikashukela aba nezinkinga ngomlomo womlomo ngemuva kweminyaka yokugula. Lokhu kwenzeka, ngakolunye uhlangothi, ngenxa yokwephulwa kwesimo semithambo yegazi eziseleni nasezitanjeni ze-mucous. Futhi ngakolunye uhlangothi, ngenxa yezinga le-glucose elikhulayo hhayi egazini kuphela, kodwa nangamathe, uma i-standardoglycemia ingatholakali.
Umlomo owomile (i-xerostomia, i-dry umlomo syndrome) ungolunye lwezimpawu zokuqala zoshukela wegazi ophezulu. Uma isifo sikashukela singanxephezelwa, khona-ke inani le-glucose emathekeni liyakhuphuka, okuholela ekukhuleni kwamagciwane we-pathogenic kanye nesikhunta, kanye nasekubhujisweni kwe-enamel yezinyo (amasenti). Kukhona umoya omubi, ukugoba okumhlophe olimini kanye nengaphakathi lezihlathi. Uma zonke izicubu ezibambe izinyo emgodini (lokhu kubizwa nge-periodontitis) zifakiwe kwinqubo yokuvuvukala, khona-ke amathuba okuba amazinyo alahlekile. Noma isiphi isilonda, bhala ngokuphulukisa isikhathi eside kakhulu ngenxa yokwehla kwezinga lokuvuselelwa kwezicubu.
Izinyo lamazinyo ahlukahlukene kanye nama-rinses enzelwe ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene zomlomo wesibeletho. Lokhu kufanele kukhunjulwe lapho ukhetha inombolo enkulu yokuhlinzekwayo. Ngokuvimbela isifo sezinsini, izinhlobo ezithile zemikhiqizo yokunakekelwa ziyasetshenziswa ezingasebenzi vele lapho kunezinqubo zokuvuvukala. Futhi qiniseka ukuthi ukhumbula ukuthi ukunamathisela okukodwa akwanele ukunakekelwa okufanele: umlomo uhlanza imfucumfucu yokudla evela ezikhaleni eziphakathi nendawo namaphakethe we-gingival, unomphumela owengeziwe wokuvimbela. Okubalulekile: abantu abanesifo sikashukela akufanele basebenzise ama-conditioners aqukethe utshwala ukugwema ukushuba kolwelwesi lwe-mucous ngokweqile!
Inani lemikhiqizo yokunakekelwa emakethe likhulu kakhulu. Umugqa we-DiaDent wochungechunge lwe-DiaVit ® wadalwa unaka izidingo ezikhethekile zokunakekelwa kwesifo sikashukela futhi unemigqa emibili:
Ngaphezu kwekhono lokuhlanzwa okuhle, i-DiaDent ejwayelekile yokuxubha izinyo inqanda ukuvikela izifo zezinsini ngenxa yezakhi ze-thymol, methyluracil, allantoin. UMenthol uvuselela umthambo womlomo, ukhipha umoya omubi. I-Rinse "DiaDent" ejwayelekile "ayinayo i-alcohol. Ngaphezu kwalokho, ngenxa ye-betaine eyethulwe ukwakheka kwayo, ithambisa umswakama we-mucous, futhi i-alpha-bisabolol inomphumela wokulwa nokuvuvukala. I-7 Herbs tata isiza ukuthuthukisa izicubu zezithupha.
I- "DiaDent" Ifa "eyinkimbinkimbi ihloselwe ukunakekelwa komlomo, lapho izinkinga sezivele zivele: izinsini zokuphuma kwegazi, usizi lapho uhlafuna, i-plaque emhlophe olimini. Umuthi wokuxubha we-DiaDent Active uqukethe isakhi esiyinkimbinkimbi esuselwa ku-aluminium lactate kanye nengxenye ye-antibacterial chlorhexidine. Futhi i-ejensi yokuhlanza ye-DiaDent Active isethule ngokukhethekile izithako ezinikeza ukuvikela okunamandla okulwa namagciwane (triclosan) kanye nesikhunta (Biosol ®).Amafutha abalulekile we-eucalyptus nesihlahla setiye asheshise inqubo yokuphulukisa yolwelwesi lwama-mucous elimele.
Ngakho-ke, ngesifo sikashukela, izinkinga ngomgogodla womlomo zinomthelela omubi onqenqemeni lwempilo. Lapho ukhetha imikhiqizo yokuhlanzeka, abantu abanesifo sikashukela kufanele bakhumbule ukuthi ukukhetha okulungile, okunekhono kuzobasiza balondoloze izinsini namazinyo anempilo, ukumamatheka okuhle futhi kuthuthukise inhlala-kahle.
Ungayinakekela kanjani i-cavity yomlomo kushukela
Ngoshukela, amehlo, izinso, inhliziyo, izinzwa nezinye izitho kuyathinteka. Futhi, ngesifo sikashukela, izitho zomgogodla womlomo ziyathinteka. Iziguli ezinalesi sifo zinobungozi obukhulu kakhulu besifo se-periodontal.
Ngoshukela, amehlo, izinso, inhliziyo, izinzwa nezinye izitho kuyathinteka. Futhi, ngesifo sikashukela, izitho zomgogodla womlomo ziyathinteka. Iziguli ezihlaselwe yilesi sifo zisengozini ephakeme kakhulu yezifo ze-periodontal (izicubu ezisekelekayo zamazinyo) kunabantu abambalwa abanempilo.
I-Periodontium - Lokhu kuyinkimbinkimbi yezicubu eziy paradental, kufaka phakathi izinsini, izicubu zamathambo zomhlathi ezizungeze amazinyo, usimende wezinyo elimboze izimpande nemisipha ebambe izinyo emgodini wethambo. Isifo i-Periodontal siyinqubo engapheli yokuvuvukala kwezicubu ezibambe izinyo emathanjeni. Njengokubonakaliswa okweqile kwalokhu kuvuvukala - ukuncipha kwamazinyo! Futhi njenganoma iyiphi inqubo yokutheleleka yokutheleleka, izifo ezithathelanayo zingakhula kakhulu isifo sikashukela kuze kufike ku-ketoacidosis.
Imbangela eyinhloko yokuvuvukala kwezinsini kanye nokubhujiswa kwe-ligament yamazinyo yizinto ezincane ezinobumba.
Ngakho-ke, indlela ephumelela kunazo zonke yokuvimbela ukugcina ngokucophelela inhlanzeko yomlomo. Kufanele futhi kwaziwe ukuthi isinxephezelo sikashukela sisiza ukuvimbela ushintsho emithanjeni yegazi, emithanjeni yezinzwa, nezicubu ezixhunywayo, lapho ukumelana kokutheleleka emgodleni womlomo kukhubazeka khona.
Ngokuqongelela nokugcinwa isikhathi eside kwe-plaque, ama-pathogen athinta amazinyo futhi aholele kwisifo sezinsini. Ukuphela kwendlela yokuqeda i-plaque ukuyikhipha ngomshini ngebrashi yamazinyo ne-floss.
Ukuxubha amazinyo akho ngebrashi lamazinyo kanye namazinyo kabili ngosuku. Ngemuva kokudla, inqwaba yemfucumfucu yokudla enamathelayo ihlala phezu kwamazinyo, angagezwa ngamathe nangomhlanga. Imfucumfucu yokudla yindawo enhle yokuzalanisa yama-microorganisms abangela ukubola kwamazinyo nesifo sezinsini. Ngakho-ke, ekuseni, amazinyo kufanele axutshwe ngemuva kokudla kwasekuseni. Futhi kusihlwa - ngaphambi kokulala.
Izinga lokuxubha kwamazinyo lakho lizoya kakhulu esimweni sokuxubha kwamazinyo akho. Izinyo lamazinyo lidinga ukushintshwa njalo ezinyangeni ezingama-2-3. I-"shaggy" yokuxubha amazinyo ayigcini nje ngokususa i-plaque, kodwa futhi ilimaza ulwelwesi lwe-mucous lwezinsini.
Lapho ukhetha ibhulashi lamazinyo, ukunakwa kufanele kukhokhwe kula maphuzu alandelayo:
Inhloko esebenza ngebhulashi akufanele idlule cm 2-2.5. Inhloko enkulu ithikameza ukuhamba kwebhulashi emgodini womlomo futhi ikwenza kungakwazi ukuhlanza izindawo okunzima ukufinyelela kuzo.
Ama-bristles kumele abe owokuzenzela. Kumazinyo asezingeni eliphakeme anamabhulashi wokufakelwa, izihloko eziphezulu zephunga ngalinye zenziwa ziphuma ngenhla futhi azilimazi izinsini lapho uxubha amazinyo akho. Ezinwele zemvelo, kunesiteshi esigcwaliswe ngamagciwane futhi singasebenza njengomthombo owengeziwe wokutheleleka. Amathanga wemvelo awanakuphindeka futhi imiphetho yawo ebekiwe ingalimaza futhi isonge izinsini. Izinga lokuqina kwenqwaba yemvelo alikwazi ukulawulwa ngumenzi. Ngakho-ke, odokotela bamazinyo batusa ukusebenzisa amazinyo ngamabhulashi okwenziwa.
Kuyadingeka ukunaka izinga lobulukhuni bezinyo, okufanele likhonjiswe kwiphakheji (elithambile, eliphakathi nendawo, kanzima). Imvamisa, uma kungekho zinkinga emgodini womlomo, kunconyelwa ukusebenzisa ibhulashi elinzima eliphakathi. Kodwa-ke, kwezinye izimo (ukwanda kokuzwela kwezinyo, ukukhungatheka ngokweqile, izinsini ezopha igazi), kuyadingeka ukusebenzisa isixubho esithambile.
Ukuma kwensimu yamabhulashi kuye kwenzeka ngezinguquko ezibalulekile kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-90s. Kanye namazinyo endabuko kwavela ama-multilevel, wavy, zigzag, njll. Kodwa-ke, azinawo umthelela obalulekile kwikhwalithi yokuhlanzeka komlomo. Ukuhlanzeka komgogodla womlomo kuncike ekutheni uxubile kahle kangakanani amazinyo akho.
Lapho ukhetha izinyo lokuxubha izinyo, preference kufanele inikezwe ama-fluoride pastes. Ama-pastes aqukethe kuphela i-fluorine compounds anganciphisa ubungozi be-caries uma asetshenziswa kabili ngosuku. Iqoqo le-fluoride endaweni yamazinyo abantu abadala kufanele libe yi-1000-1500 ppm, noma i-0.1-0.15%.
Ukuvimbela isifo sezinsini, akuyona amazinyo abalulekile ekuqaleni, kepha ukususwa ngokucophelela kwe-plaque. Okokuqala, kufanele kukhunjulwe ukuthi akuwona amazinyo axubha amazinyo akho, kungakhathalekile ukuthi kubiza kangakanani futhi kusezingeni eliphakeme kangakanani, kepha wena - ngesenzo sokwenza, “ukhukhulula” ukunyakaza kwebhulashi. Kulokhu, ukunyakaza okuvundlile kufanele kugwenywe. Lapho ukuxubha sekuqediwe, ingemuva lolimi kumele lihlanzwe ngebrashi lamazinyo, ngoba ama-microorganisms kanye nemfucumfucu yokudla iqoqeka lapho. Ngaphezu kwalokho, i-fluorine ayina nje kuphela umphumela wokulwa noku-carious, kodwa futhi nomsebenzi wokulwa nezidakamizwa. Ngakho-ke, akuvami ukweluleka ngaso sonke isikhathi ukuthi ube namazinyo ahlukahlukene ahlukahlukene kuzo zonke izikhathi. Okuhlukile kungaba izinyo lokupheka lonyango elichazwa udokotela wakho wamazinyo.
Akunandaba ukuthi sizama kanzima kangakanani, ibhulashi lamazinyo lingahlanza kuphela izingxenye ezintathu kwezinhlanu zezinyo. Izindonga ezimbili eziseceleni (noma zokuthintana) zamazinyo, ezisondelene kakhulu namazinyo aseduze futhi angafinyeleleki ebhulashi, zahlala zingcolile. Kungakho ukusetshenziswa kweflash yamazinyo kudingekile nje njengokudanisa. Ukuhlanza izikhala eziphakathi nendawo, kufanele kusetshenziswe ama-flosses akhethekile kuphela wamazinyo (amafosili). Ukusetshenziswa kwezintambo ezijwayelekile ze-bobbin ukuthunga akwemukeleki, ngoba azinazo izindawo zokuzihlanza futhi, ngaphezu kokulimaza izinsini nokulimaza, ngeke zenze lutho. Ama-Flosses anesimo esithambile, amboza kalula indawo yezinyo, enziwe ngosilika aphethwe nge-wax, okuwavumela ukuthi angene kalula esikhaleni esangaphakathi futhi angalimazi izinsini.
Thatha intambo engu-40cm ubude.
Ifulegi lamazinyo kufanele lisebenzise phambi kwesibuko nokukhanya okuhle ukuvikela ukulimala kweentsini.
Usebenzisa ukunyakaza kokubona, faka intambo ngokucophelela esikhaleni esangaphakathi.
Musa ukufaka iflash yamazinyo yonke indlela eya e-gum ukuze ungayilimazi.
Kokelezela i-floss ezungeze izinyo futhi ngokunyakaza okumnene ukhiphe i-plaque ohlangothini kusuka gamu kuye endaweni ehlafunwayo izikhathi eziningana.
Qhubeka uhlanze igebe elilandelayo.
Hlanza umlomo wakho ngemuva kokuqhakaza.
Uma kunesidingo (ukuba khona kwezinto ezisuswayo noma amabhuloho, izinto ezisetshenziswayo ezinganeni, ukuba khona kwezikhala ezinkulu eziphakathi), udokotela wamazinyo angakucebisa futhi akufundise ukuthi ungayisebenzisa kanjani eminye imikhiqizo yokuhlanzeka komlomo. Kungaba ama-superflosses noma amabhulashi asezingeni, okunisela.
Abantu abanesifo sikashukela kufanele bavakashele udokotela wamazinyo okungenani kanye ezinyangeni ezi-6, kwesinye isikhathi kaningi kakhulu uma udokotela wamazinyo ekuncoma. Udinga ukuthi utshele udokotela wamazinyo wakho ukuthi unesifo sikashukela. Izifo eziningi zomlomo ekuqaleni zi-asymptomatic futhi azibangeli buhlungu noma ukungakhululeki. Ukuhlolwa okujwayelekile okuvikelekile kuzosiza ekuboneni inkinga emgomeni womlomo ngaphambi kokuthi iqale ukukulethele ukukhathazeka, khona-ke ukwelashwa kuzoba ngempumelelo kakhulu. Uma usuvele unezinkinga nezikhalazo, kufanele uthintane nodokotela wamazinyo wakho ngokushesha.
Udinga ukwazi ukuthi kulawulwa kahle kangakanani futhi ukubike kudokotela wamazinyo wakho ngesikhathi sokuvakasha ngakunye.
Thola izeluleko kudokotela we-endocrinologist ngaphambi kokunquma ukwelashwa kwesifo se-periodontal. Cela udokotela wakho we-endocrinologist ukuba abonane nodokotela wamazinyo wakho ngesimo sakho esivamile ngaphambi kokuqala ukwelashwa.
Kungase kudingeke ukuthi ushintshe indlela odla ngayo noma uhlobo lwe-insulin lapho uhlela ukusebenza kwangaphakathi.
Musa ukuhlela izinqubo zamazinyo ezingaphuthumayo uma ushukela wakho wegazi ungalawulwa kahle. Kodwa-ke, izinqubo ezinamandla zokutheleleka nokuvuvukala, njengama-abscesses, kufanele zelashwe ngokushesha.
Uma uluthandile lolu lwazi - wabelane ngalo nabangani bakho
Mayelana nesifo sikashukela, imibono emibi eminingana isezimpandeni. Zithandwa hhayi phakathi kweziguli kuphela, kodwa futhi naphakathi kodokotela abajwayelekile. Sinika imibono evamile kakhulu, ephelelwe yisikhathi futhi engalungile ngokuphelele ngalesi sifo.
I-Polyneuropathy ingenye yezindlela ezivame kakhulu zesifo sikashukela se-neuropathy. I-Poly isho okuningi, kanti i-neuropathy isho isifo sezinzwa. I-peripheral neuropathy ithinta izingxenye zomzimba ezitholakala kude nendawo, i.e. izandla nezinyawo
Ukulimala kwe-retina okubangelwa isifo sikashukela kubizwa ngokuthi yi-retinopathy yesifo sikashukela. Indlela yokulimaza ukuphula ukuhamba kwegazi emithanjeni emincane kakhulu ye-retina.
Ama-PROTEINS (amaprotheni) - angamakhemikhali aqukethe i-nitrogen - alukho uhlobo olulodwa lwamaprotheni i-nitrogen engangeni kulo (ngakho-ke, izinga leproteyini emikhiqizweni yokudla linqunywa kokuqukethwe kwalesi sakhi samakhemikhali).
Watkins P.J. Isifo sikashukela mellitus (ukuhumusha kusuka esiNgisini). IMoscow - iSt. Petersburg, iBinom Publishing House, iNevsky Dialect, 2000, 96 pp., Amakhophi angama-5000.
Brackenridge B.P., UDolin P.O. Isifo sikashukela 101 (ukuhunyushwa Sangl.). IMoscow-Vilnius, iPolina Publishing House, 1996, amakhasi ayi-190, ukusakazwa kwamakhophi ayi-15,000.
Kasatkina E.P. Isifo sikashukela ezinganeni. IMoscow, indlu yokushicilela "Umuthi", 1990, 253 maq.
I-Ametov A. S. Izinkulumo ezikhethiwe ku-endocrinology, I-Medical News Agency - uM., 2014. - 496 k.
"Ungaphila kanjani nesifo sikashukela (Konke ukwelashwa)." Ngaphandle kokuchaza umbhali. IMoscow, indlu yokushicilela "OLMA-Press Bookplate", 2002, 127 p., Ukusakazwa kwamakhophi angama-5000.
Ungasinakekela kanjani isikhumba sakho?
Ungayinakekela kanjani indawo yakho yomlomo
Ukugwema Izinkinga Zomlomo Nezikhumba
Ukudla sikashukela akuyona into eqine kakhulu.Kepha noma kunjalo, ngokuqhubeka kwesikhathi, iziguli zakha ukuntuleka kwamavithamini namaminerali. Isidingo esikhulu samavithamini B, ama-antioxidants kanye namaminerali.
Isifo sikashukela ngamanani
Isifo sikashukela mellitus “Ubhubhane olungatheleleki lwesintu” luba yinkinga ephuthumayo emhlabeni jikelele. E-Russia, bangaphezu kwezigidi ezintathu ababhalisile iziguli zesifo sikashukela, futhi inani labo liyanda minyaka yonke ngabantu abayizinkulungwane ezingama-300. Cishe abantu abayizinkulungwane ezingama-800 batholakala benamazinga anyukayo kashukela (ushukela)isifo sikashukela". Ngokusho kokuqagelwa kochwepheshe, isibalo seziguli ezinesifo sikashukela eRussia singaphezu kwezigidi eziyishumi, futhi ukukhonjwa kwaso kuyindaba yesikhathi kuphela, ngamaphesenti angama-90 abantu abangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala.
Enye yezimpawu zokuqala zesifo sikashukela ukoma kanye nomuzwa ovuthayo emlonyeni, nomoya omubi. Ngalezi zinkinga, umuntu uvame ukuya kudokotela wamazinyo, ophakamisa ukuthi unesifo sikashukela. Ama-Caries, i-gingivitis, i-periodontitis ne-periodontosis ajwayelekile kakhulu futhi angathandeki nabangane besifo sikashukela. Azilimazi kuphela kuphela izinga lempilo yeziguli, kodwa futhi zinomthelela omubi ekunxephezelweni kwesifo esikhona.
Isifo sikashukela sifaka ukwephulwa komzimba wamaminerali emzimbeni, okubonakala ngesimo samazinyo. Ukwehla kwenani lamathe (umlomo owomile) kuholela ekuphazamisweni ezinqubweni zokuvuselelwa koqweqwe lwawo lwamazinyo, kuba buthaka. I-asidi ekhishwa ngamabhaktheriya aphindaphindwe ngokushesha ku-plaque eningi ingena kalula ku-koqweqwe lwawo bese ilibhubhisa. Caries uyakhula.
I-Saliva ayigcini nje ngokuhlanganyela ezinqubweni zokuvuselela kabusha, kepha futhi idlala indima enkulu ekugcineni ibhalansi evamile yama-microorganisms omlomo. I-Saliva lysozyme ivimbela ngempumelelo amagciwane angama-pathogenic. Ukwehla kwenani lamathe kuholela ekukhuleni ngokushesha kwe-microflora ye-pathogenic, okuthi, kuhlanganiswe nokwephulwa kokungazweli kwendawo kanye nokuwohloka ekuhlinzekweni kwegazi kwizicubu ezithambile, kuholele ku-gingivitis - gingivitis. Uma kungekho ukunakekelwa okwanele, ukuvuvukala kungadlula kuwo wonke izicubu ezizungeze izinyo: kuba nenkinga enkulu ngokwengeziwe - i-periodontitis. Ubukhulu bezinguquko zokuvuvukala ku-mucosa yomlomo kuncike ngqo ebukeni besifo sikashukela mellitus, isikhathi sokukhula kwayo kanye nobudala besiguli. Imvamisa ye-periodontitis ezigulini ezinesifo sikashukela isuka ku-52 iye ku-90%.
Ukuvuvukala okungavimbeki nokuphazamiseka okuqhubekayo kwe-metabolic of izicubu ze-periodontal kuholela ekuqothulweni kwezinto ezi-ligamentous zamazinyo nezicubu zamathambo emihlathini ezungeze amazinyo. Isifo se-Periodontal siyakhula. Izintambo zamazinyo ziyavezwa, amazinyo abe eselula bese ngenxa yalokho ayaphuma.
At ushukela ongafakwanga ushukela Izinkinga ziyaqhubeka, ngenxa yalokho, ziphilile, azonakaliswa yi-caries, amazinyo ayathukululwa ukuze odokotela bamazinyo kufanele bawasuse. Kumele kuqashelwe ukuthi ukukhishwa kwamazinyo ezigulini ezinesifo sikashukela kunzima kakhulu - inqubo yokuphulukisa yinde futhi ibuhlungu.
Kepha kukhona impendulo. Kuyaziwa ukuthi i-periodontitis enzima nesifo se-periodontal Uhlobo II sikashukela yehlisa ukusebenza kwesenzo insulinekhiqizwa umzimba wesiguli, ngakho-ke ukwelashwa kwezifo zemithambo yomlomo kungenye yezinto ezibalulekile zokulawula isifo sikashukela uqobo.
Ngeshwa, iziguli ezinesifo sikashukela ezingaphezu kwe-60 kaningi azisenamazinyo azo, okuholela ebunzimeni obukhulu ekugcineni ukudla okunempilo. Isidingo sokusebenzisa amazinyo asuswayo sikhulisa izinkinga ze-mucosa yomlomo. I-Stomatitis, amathuba okuthuthuka aphezulu kakhulu, futhi ithinta ikhwalithi yempilo yeziguli.
Ukuze ugweme lezi zinkinga, okokuqala, khokhela ushukela (yenza ngokwejwayelekile ushukela wegazi) futhi uthobele imithetho eminingi yokunakekela ngomlomo:
1. Ukuxubha amazinyo noma okungenani hlamba umlomo wakho ngosizo olukhethekile lokuhlanza ngemuva kokudla ngakunye. Ngaphezu kwalokho, kufanele ususe imfucumfucu yokudla ezikhaleni eziphakathi nendawo nge-floss yamazinyo. Lokhu kufanele kwenziwe ngokucophelela ukuze kungalimali izinsini. Uma kungabikho ukopha kwezinsini, iziguli ezinesifo sikashukela zingasebenzisa isixubho sobulukhuni obuphakathi, obuthambisa kahle izinsini. Ukunameka nokuhlanza ukusetshenziswa kwansuku zonke akufanele kube nezinto eziqinile ze-antibacterial, i-peroxides eqinile enomphumela omhlophe, nezinto ezihlukumeza kakhulu. Izithasiselo eziwusizo ezithuthukisa imetabolism kanye nokuvuselelwa kwezicubu, kanye nezakhi zemvelo zemvelo ezinikeza umphumela omnene wokulwa nokuvuvukala. Izithako zezitshalo ezinjenge-sage, chamomile, irosemary, i-oats ne-nettle zenza umsebenzi omuhle walokhu.
2. Uma izinsini zikopha noma zibuhlungu, hlamba amazinyo akho nge-bristle brashi. Kulokhu, sebenzisa izinyo elikhethekile kuphela elinokuqina / i-astringent, ama-antibacterial kanye nezinto ezilwa nokuvuvukala. I-Mouthwash kufanele ibe nezinhlobo zokuphinda zenziwe kabusha futhi zibulala izinzwa. Njengengxenye yezinyo lamazinyo kanye nama-rinses okusetshenziswa ngesikhathi sokuqothuka kwezifo ezingena esikhathini, ama-phytocomplexes asuselwa kokukhishwe kanye namafutha abalulekile amakhambi okwelapha azibonakalise kahle. Njengomthetho, amakhompiyutha anjalo anokusabela kwe-acid, ngakho-ke odokotela batusa ukuwasebenzisa kuphela enkambweni yokwanda engapheli amasonto amane, emva kwalokho isiguli kufanele sibuyele ekusebenziseni imikhiqizo ekhethekile eyisisekelo yokunakekelwa kwesifo sikashukela.
Ukukhetha kwemikhiqizo yokuhlanzeka
Lapho ukhetha imikhiqizo yokuhlanzeka ngomlomo, iziguli kufanele ziqonde ukuthi akuzona zonke izinyo lokuhlanza amazinyo nezomlomo ezinganikeza ukunakekelwa komlomo okusebenza kahle koshukela. Ukukhetha kwabo imikhiqizo ekhethekile yokwelapha ne-prophylactic yokunakekelwa komlomo, eye yenziwa izivivinyo zomtholampilo futhi kunconywa odokotela bamazinyo nabasizi be-endocrinologists ukuthi basebenzise isifo sikashukela.
Iqoqo lamathuluzi wokunakekelwa okusebenzayo komlomo kwesifo sikashukela kufanele lifake imikhiqizo yomkhiqizo eyisisekelo eklanyelwe ukugcina isimo esijwayelekile samazinyo nezinsini futhi ivikele ukuthuthukiswa kwezifo ezingena esikhathini, kanye namathuluzi aklanyelwe ukukhulula ngokushesha lezi zifo.
Ukulawulwa kweshukela kanye nokusetshenziswa kwama-praphylactic agents akhethekile, athuthukiswe kucatshangelwa ubuntu bokuthuthukiswa kwezifo zomlomo kushukela, yizimo zokuphoqelela, ukuqaliswa kokugwema ukuthuthukiswa kwezinkinga, futhi kusiza ukuthuthukisa isinxephezelo sesifo esiyimbangela.
Lo mbhalo ushicilelwe ephephandabeni elithi Pharmaceutical Bulletin